China Mini ntutu ahịhịa na yi roba mkpuchi, UV eletriki, mmiri nyefe ụlọ ọrụ na-emepụta | Yongsheng
Obere ntutu ntutu na mkpuchi roba, UV eletrik, mbufe mmiri
Ihe: ABS ， Rubber ， Naịlọn, Bristles
Agba: Yi UV electric, Rubber mkpuchi, Ọgwụ… Customization.
TX2X-6T, T42X-7T, T42X-5T, T42X-19T
TXXX-6T, T66X-7T, T66X-5T, T66X-19T
TXXX-6, T90X-7, T90X-5, T90X-2
Ngwugwu zuru oke: ahịhịa ọ bụla nwere akpa naịl na-emeghe. 24PCS / igbe dị n'ime. 240PCS / katọn.
Obere Obere Obere - Obere maka nchekwa dị mma, dị ukwuu maka ndụ gị na-arụsi ọrụ ike kwa ụbọchị. Debe akpa gị maka mmetụ aka. Obere ntutu ntutu na-arụ ọrụ dị ukwuu na mmiri ma ọ bụ na-enweghị ntutu isi ma zuru oke maka ụmụ nwoke, ụmụ nwanyị na ụmụaka. Anyị na-eme ka brushes pere mpe, cuter na zuru oke maka ndụ na-na-laa. Petite buru ibu maka nchekwa dị mfe, dị mfe n'ime akpa gị, ụmụaka na-ahụkwa ya n'anya .Nke a na-arụ ọrụ dị ukwuu na mmiri ma ọ bụ ntutu isi. Kwesịrị ekwesị maka ụmụ nwanyị ， ndị nwoke na ụmụaka, ogologo ma ọ bụ obere ntutu isi, obere ma ọ bụ ntutu gbara agba.
Anyị Little Detangler Hair Brush na-egosipụta Nanị, Ihe ahụ siri ike na-eme ka ahụ dị mma mgbe ị na-eme ka ntutu dị n'isi mgbe ị na-akpali ọbara na-agba ume ma na-ewusi ntutu gị ike
A na-eji Squirt Detanglers anyị eme ihe n'ụzọ na-enweghị atụ iji belata ihe mgbu na ichebe ntutu isi megide nkewa na nkwụsị. Ọ na-ahapụ gị ịsachasị obere ike ka ị nwee ike wepu onwe gị na obere mmebi nke ntutu gị.
Ọzọkwa anyị nwere ọtụtụ dị iche iche iche iche nke shapes na isi na ahụ nwere ike họrọ. Aka na adụ adịgide pụrụ ịbụ nnọọ mfe aka. Enwere ike iji isi dị iche iche mee ihe n'ọtụtụ ọnọdụ ma nwee mmetụta niile ịchọrọ.
Fkpakọba na kọmpat imewe maka mfe ebu. Obere nha dabara na akpa, akpa, akpa akpa. Adabara njem, ụbọchị, ụlọ ahịa, pụọ.
Nke gara aga: Ejiji ntutu ọhụrụ kachasị ewu ewu
Osote: Ọkachamara ntutu ntutu gbara agba nwere oke nrụgide okpomọkụ n'ụdị dị iche
Disposable ntutu ahịhịa
Agehịa aka osisi ntutu
Square Wooden Hair ahịhịa
Wen ntutu ahịhịa